Kiobà Mandoko Mavo Ho Fanohanana Ireo Gadra “Los Cinco” Any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Kiobà Mandoko Mavo Ho Fanohanana Ireo Gadra “Los Cinco” Any Etazonia
Voadika ny 12 Septambra 2013 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Español
sarintavan'ny mpisera Facebook maneho firaisan-kina noho ny manjò ireo Los Cinco.
[Amin'ny teny espaniola ny rohy.]
Fanamarihana ny faha-15 taona nisamborana ireo Kiobàna dimy izay niditra an-tsokosoko any amin'ireo vondrona any Miami, Etazonia ka nanohintohina ny asam-panakorontanana sy ady psikolojika hamelezana ny vahoaka Kiobàna ity andron'ny 12 Septambra 2013 ity. Mbola tavela any amin'ny fonja any Etazonia any ny efatra amin'izy ireo.
Ny ankatoky ny tsingerintaona sy mandritra ny herinandro dia nisy lahatsary iray niparitaka tany amin'ny tambajotra sosialy sy ny televiziona kiobàna. Asongadin'izy io ny kinovan'ny hira malaza “Mamatora fehy mavo manodidina ny hazo ôka efa antitra,” antsain'ireo mpihira kiobàna Silvio Rodríguez, Amaury Pérez Vidal, Frank Fernández ary Kiki Corona, ankoatra ny hafa.
Araka an'i René González, iray amin'ireo gadra kiobàna tany Etazonia ary niverina vao haingana tao amin'ny nosy rehefa namita ny 13 taona nanagadrana azy dia:
Tonga tao amiko avy amin'ny olona eny an-dalana eny ny hevitry ny fanentanana… ny ilaintsika dia zavatra iray izay tian'ny Amerikana Tavaratra ataony mari-piavahana… Nifoha aho indray andro ary niteny hoe: fehy mavo! satria izany no dikan'ny fanehoana azy any Etazonia.
Tao amin'ny kabary nataon'i González nalefan'ny fahitalavitra kiobàna no nitenenany hoe:
Namita manontolo ny didim-pitsarana nampiharina tamiko aho, saingy tsy maintsy misoroka izay mety hitranga amin'ireo rahalahiko efatra amin'izay mety hahavoa azy ireo, eny fa na dia sarotra aza ny milaza azy, fa tsy maintsy tsaroantsika fa ho an'i Gerardo dia midika hoe raha tanteraka ny fanirian'ny fitondrana amerikana dia ho faty any am-ponja izy.
Nampiany avy eo:
Nandritra ny taona maro, ny nisongadina ho anay hatrany dia ny fitiavan'ny vahoaka kiobàna. Niseho tamin'ny fomba maro izany fitiavana izany, tamin'ny taratasy, hafatra, kisarisarin'ankizy – ary izany fitiavana izany ihany no tianay asongadina amin'io androm-pahatsiarovana io.
Tsara vitana aho nahatsapa izany, niaina izany, nanendry izany, niaina izany teny an-dalamben'i Kiobà, amin'ny fomba rehetra azo atao sy any amin'ny faritra rehetra eto amin'ny Nosy; ary izany ilay fitiavana iangavianay asehonareo an-karihary amin'io fotoana io, na aiza na aiza na amin'ny fomba manao ahoana na manao ahoana araka izay safidinao, miaraka amin'ny zavatra hafa mampiavaka antsika amin'ny maha-kiobàna antsika ary amin'ny fomba tsara indrindra azon'ny tsirairay atao—na any an-dakilasy izany, toera-piasana, eny amin'ny mpifanolo-bodirindrina na atao tetikasan'ny fokonolona.
Tao amin'ny lahatsoratra iray mampihetsi-po no nitateran'ny Progreso Semanal :
Isaky ny misy andro ipoiran'ireo fehy ireo, eny fa na dia ao amin'ny El Morro ao havana aza… Dia hahitana filaharana, fiandrasana, fitokisana ireo Kiobàna efatra mifondra 15 taona any Etazonia. Niantso antsika i René González. Ho ataon'ny vahoaka Kiobàna ihany koa izay handrenesana azy. Ho takatry ny vahoaka manerana an'i Amerika avaratra ny fitakiantsika.
Nanambara i Israel Rojas nandritra ny fampisehoana nataon'ny Kiobàna mpihira olon-droa malaza Buena Fe, tamin'ny Septambra tao Diez de Octubre distrikan'i Havana:
Fampisehoan'i Buena Fe. saripikan'i Iroko Alejo, nahazoana alalana.
[Saiky] tsy hilaza izao aho, saingy ankehitriny rehefa eto aho dia hilaza ny momba ilay hira: Misy iray amin'ireo dimy, izay noterena hamita ny saziny, tsy hahita ny fahazavana amin'ny fivoahana amin'ny tonelina. Gerardo izany. Efa elaela izany ny gazety Juventud Reblede no namoaka ny sasantsasany amin'ny fanambaran'i Gerardo ny nahalatsa-pitia azy tamin'i Adriana [vadiny] ka nampihetsi-po ahy izany. Tena olombelona tokoa izy ary tsy nahalala fa ny ampitso dia teraka io hira io, izay nataoko ho an'i Adriana sy Gerardo. Antsoina hoe “Proa a Popa” [Aloha sy Aoriana, Mpanetsika avy Aoriana] izany ary faniriako ny hihita azy ity indray andro any rehefa manatrika ny iray amin'ny fampisehoana an-kira ataonay ry zareo.
Araka ny mpanorina ny Alamesa, vondro-toera-pisakafoanana an'ny fanjakana sy an'ny tsy miankina ao Havana, izay vao nitatra tany amin'ny faritanin'i Matanzas dia: “Hamoaka sakafo miloko mavo izahay amin'ny faha-12 ny volana; izany no fandraisanay anjara.”
Saingy nitarina ho any amin'ilay PoertoRikana Oscar López Rivera, izay gadra politika mifonja 32 taona any Etazonia ihany koa ny fitakian'ny vahoaka Kiobàna. Manazava ao amin'ny bilaoginy Cuba la isla infinita i Miguel Fernández: “Amin'ity 12 Septambra ity ny fehy mavoko dia nataoko ho an'ireo Kiobàna Los Cinco sy ho an'ilay PoertoRikana Oscar López Rivera.”